အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲ လက်ရှိသမ္မတ ဂျိုကိုဝီ အနိုင်ရရှိကြောင်းကြေညာ - Yangon Media Group
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲ လက်ရှိသမ္မတ ဂျိုကိုဝီ အနိုင်ရရှိကြောင်းကြေညာ
ဂျကာတာ၊ ဧပြီ် ၁၉ – အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတရွေး ကောက်ပွဲကို ဧပြီ ၁၇ ရက်က ကျင်းပခဲ့ရာ တရားဝင်မဟုတ်သော အလျင်အမြန်ရေတွက်ခဲ့သော အဖြေ အရ လက်ရှိသမ္မတ ဂျိုကိုဝီဒိုဒိုက အနိုင်ရရှိကြောင်း ကြေညာလိုက် သည်။ ပြိုင်ဘက် ပရာဘိုဝိုဆူဘီယံ တိုက မဲရေတွက်မှုကို ငြင်းဆို လိုက်ရာ တရားရုံးတွင် ရင်ဆိုင်ရ ဖွယ်ရှိကြောင်း ဘလွန်းဘတ်သတင်း ဌာနက ဖော်ပြလိုက်သည်။
ဝီဒိုဒို(ခေါ်)ဂျိုကိုဝီ ကပြော ကြားရတွင် လွတ်လပ်သော ရွေး ကောက်ပွဲလေ့လာရေးအဖွဲ့များ၏ စာရင်းအရ ¤င်းနှင့် ပူးတွဲယှဉ်ပြိုင် သူ ဖာရပ်ဖ်အာမင်တို့သည် မဲ ၅၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့ပြီး ပရာ ဘိုဝိုမှာ ၄၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း သာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားလိုက် သည်။ သမ္မတက ¤င်းအားထောက် ခံသူများအား ရွေးကောက်ပွဲကော် မရှင်က တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းကို စောင့်ဆိုင်းကြရန်လည်း တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ဂျိုကိုဝီက အနိုင်ရရှိကြောင်း ဂျကာတာရှိ သတင်းထောက်များအား ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက် ဧပြီ ၁၈ရက်တွင် ပရာဘိုဝိုက ၎င်းင်းအနိုင်ရရှိကြောင်း ဆန္ဒမဲ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းရရှိကြောင်း၊ ၎င်းင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့က အလျင်အမြန်ရေတွက်ခဲ့ခြင်းက ရရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ပရာဘိုဝိုသည် ၂ဝ၁၄ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ဂျိုကိုဝီအား မဲအနည်းငယ်လျော့ကာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ သည်။ ¤င်းက မဲပေးမှုပုံမှန်မဟုတ် ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
နှစ်ဦးစလုံးက အနိုင်ရရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ရာ ကော်မရှင်၏ တရား ဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းရာ တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုမှုရှိလာမည် ဟု ဆိုသည်။
သက်ဆိုင်ရာက အလျင်အ မြန်မဲရေတွက်ပြီး တရားဝင်အရှုံး အနိုင်ကို နောက်အပတ်တွင် ကြေ ညာသွားမည်ဟု ဆိုသည်။ လက်ဖြင့် မဲရေတွက်မှုမှာ မေ ၂၂ ရက်မှပြီးစီး မည်ဖြစ်သည်။ ဂျိုကိုဝီက ကိုယ်စား လှယ်စေလွှတ်ကာ ပရာဘိုဝိုနှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
ပရာဘိုဝိုသည် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ကလည်း တရားရုံးသို့ လျှောက်ထား ခဲ့ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရုံးက ပယ်ချခဲ့သည်။
ပရာဘိုဝိုက အဆင့်တိုင်းမှာ မဲလိမ်မှုများရှိခဲ့ကြောင်း ဘလွန်း ဘတ် သတင်းဌာနကိုပြောခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှား၏ အဆင့်ပေါင်း စုံကိုယ်စားလှယ် ၂ဝဝဝဝအတွက် ဧပြီ ၁၆ ရက်က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် သူ ၂၄၅ဝဝဝ ကျော်ရှိခဲ့သည်။ မဲပေး နိုင်သူ ၁၉၃ သန်းမှ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း လာရောက်မဲပေးခဲ့ကြ သည်။
ထိုင်ဝမ် ဟွာလီယန်မြို့တွင် ၆ ဒသမ ၁ အဆင့်ရှိ အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် လ?
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချမှုလုပ်ငန်းများကို Amazon ကုမ္ပဏီရပ်ဆိုင်းတော့မည်
အောင်ဘာလေထီနှင့် ကာစီနိုကဲ့သို့ ကံစွမ်း၊ ဥာဏ်စွမ်း ကစားခြင်းများကို နိုင်ငံသား အကျိုးစီးပ
ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့် ခံထားရသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ရဲစ??
သန်လျင်မြို့နယ်အတွင်း အဝီစိတွင်းတူးရာမှ ဓာတ်ငွေ့ပါသည့် ရေများ ပေ ၁ဝဝ ကျော်အထိ ပန်းထွက်
နိုင်ငံတကာ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းဆိုင်ရာပြပွဲတွင် ၂၃ နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီ ၁၅၀ ကျော်??
မန္တလေးရှိ အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သော ဧကအကျယ်မြေကွက်များနှင့် ပလပ်မြေ ၁၃၅ ကွက်ကို ဂရန်မျ??